Ahoana ny fomba handravahana siny fitaratra amin'ny teknika decoupage | Asa tanana
Toñy Torres | 20/07/2021 11:56 | Asa-tanana fitaratra, Asa tanana an-trano
Ny teknikan'ny decoupage dia misy gluing taratasy amin'ny gluing amin'ny faritra samihafa. Mba hanaovana izany, dia mifangaro ny lakaoly fotsy sy ny rano ampiasaina, izay rehefa maina dia mijanona ho mangarahara. Ny valiny dia manaitra foana ary tena tsara tarehy, satria manome ny fiheverana ho asa tanana.
Azonao atao ny mampiasa karazan-taratasy maro amin'ity asa-tanana ity, toy ny fametahana gazety, famonosana taratasy, na amin'nity tranga ity, napkin voaravaka. Ho an'ity karazan-pitaovana ity dia mety indrindra izy io, satria ny servieta vita amin'ny taratasy dia tena maloto, manify ary mora raisina. Te hahay handoko ny siny fitaratra amin'ny teknika decoupage ve ianao?
1 Siny fitaratra voaravaka
1.2 Dingana isan-kerinandro
Siny fitaratra voaravaka
Mba hanombohana dia mila mahazo fitaovana tena tsotra, mora ary mora tadiavina ianao. Mitahiry siny fitahirizana vera, vinaingitra na divay, Tsy maninona na misy loko io satria hosaronany tanteraka. Raha mahita tavoahangy na siny fitaratra misy fanamaivanana ianao, ny valiny dia hahagaga kokoa amin'ny teknikan'ny decoupage. Ho hitantsika ireo fitaovana sy tsikelikely.
Ireo no fitaovana ilainay:
Napkin taratasy voaravaka
Kaontenera iray miaraka amin'ny rano
Ireto misy dingana tokony harahina mba hamoronana siny fitaratra voaravaka miaraka amin'ny teknika decoupage.
Voalohany dia tsy maintsy ataontsika saraho ny sosona ny napkin, hampiasa ny sosona farany izahay.
Ankehitriny isika dia hanao ny fifangaroan'ny adhesive, mila ampahany iray amin'ny rano isika amin'ny roa amin'ny lakaoly fotsy. Azonao atao amin'ny maso izany.
Notapahinay tamin'ny taratasy ilay taratasy na raha misy sary dia esorinay izy ireo.
Amin'ny borosy no ametrahanay lakaoly kely amin'ny taratasy dia apetrantsika avy eo amin'ny siny fitaratra.
Izahay dia manarona taratasy feno siny feno, raha mampiditra lakaoly fotsy amin'ny faritra manontolo isika.
Hamita apetaho amin'ny lakaoly fotsy ny faritra rehetra. Aza manahy raha tomany ny taratasy, dia azonao atao ny manisy tapa hafa eo amboniny.
Raha vao ritra tanteraka ny lakaoly fotsy dia hangarahara. Raha te hiaro ny siny fitaratra voaravaka teknika tsotra sy tsara ianao, asio palitao farany verinia mazava fotsiny. Ary voila, azonao atao izao ny mametraka ny borosinao, ny marika, ny fanjaitro fanjaitra na izay tianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Asa tanana » asa-tanana » Asa tanana an-trano » Ahoana ny fomba handravahana siny fitaratra amin'ny teknika decoupage